Iyo iPhone 7 ndiyo iri kufarirwa mukutengesa pamberi peiyo iPhone 8 | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 ndiyo iri kufarirwa mukutengesa pamberi peiyo iPhone 8
Patakaona kuvhurwa chokwadi ndechekuti tese takashamiswa neshure uye mashoma mashoma maficha eiyo iPhone 8, zvisinei, isu tinozviisa isu mune yakakosha nzira yekufunga kuti kana kwete yazvino Apple modhi yaive yakakodzera kutenga.
Ichokwadi chiri kutora pekutanga kupfuura caprice mukutengesa, iyo iPhone 7 ndiyo yave yave inofarirwa nevaya vari kutsvaga kuwana iyo iPhone mwedzi wapfuura. Zvakanyanya zvekuti iri pamberi peiyo iPhone 8 mukutengesa kunyangwe yanga iri pamusika kwegore ... Apple ingadai yakatarisira kuita uku kune chikamu chevashandisi here?
Kutengesa zvisina waya, kadhi rinokurumidza kudhura, girazi kumashure uye zvimwe zvishoma. Chokwadi ndechekuti iyo iPhone 8 ndiyo yaifanira kuve iri iyo iPhone 7 muzuva rayo, Apple yanga ichida kutambanudza chingamu uye ndokuityora. Zvikuru zvekuti vashandisi havaone zvinokurudzirwa kuti vabate iyo yazvino modhi yekambani, zvirinani kuti ndizvo zvinotaurwa nenhamba dzeReuters nenhamba dzekambani dziri mumaoko avo. Iyo iPhone 7 nemutengo wayo wepazasi wave kukwezva zvakanyanya mumusika umo vashandisi vanoratidzika kunge vasingawane mune hunhu hweiyo iPhone 8 chikonzero chakaringana chekudyara imwe kana zvasvika pakushandura mafoni. Pamwe nekuti iyo iPhone 7 yakanyatsogadzirwa, kana nekuti iyo iPhone 8 haina kukwezva zvakakwana. Ehezve, iyo iPhone 8 parizvino ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzamunogona kuita nadzo, dambudziko iri chaizvo kuti iyo iPhone 7 mune ayo maviri misiyano inoshanda zvakare mushe.
Kunyangwe KGI yakafungidzira kuti iPhone 8 yekutengesa iri nani zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa, makambani senge AT&T anoti zvakapesana, uye purofiti yaFoxconn chiratidzo cheizvozvo. Zvichida chipo chine hukasha uye nemutengo wakachinjika uyo varidzi vari kupa muiyo iPhone 7 urikuita vashandisi vazhinji vasingabvunze zvemazuva ano musimba netekinoroji kuti varove patinogona se iPhone 7 Jet Nhema kana yayo RED musiyano, mafoni ayo ipa imwe yemusiyano mukugadzirwa uye ichiri kunyanya kudhura pane iyo iPhone 8. Zvingave zvakadaro, zviri pachena kuti mvura dzakadzikama pakatarisana nehushingi huchaonekwa neiyo iPhone X musika, foni iyo pasina mubvunzo ichapedza dura kwese kwarinoratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iPhone 7 ndiyo iri kufarirwa mukutengesa pamberi peiyo iPhone 8
Iyo iPhone neApple Watch zvinoramba zvichitonga pakati pevechidiki
Apple Kubhadhara kunowedzera muIndia nekufamba kusingatarisirwi